ဆာရင်းတွေးလို့ချက်ကြစို့ | Food Magazine Myanmar
သြဂုတ်လမှာတော့ ဆရာမဒေါ်နန်းစန်းစန်းအေးက ‘ ငါးခူကြော်သုပ်’ အပါအဝင် ဟင်းလျာအတွဲအစပ် (၇)မျိုးကို စီစဉ်ထားပါတယ်။ အဆိုပါ ဟင်းလျာအတွဲအစပ်များကတော့ –
၁။ ပုစွန်ထုပ်ကြက်သွန်ဖြူကြော်၊ ထောပတ်ခရမ်းသီးနှပ်၊ ပြောင်းဖူးကြော်၊ ငါးပိသုပ်၊ ဇလပ်ညွန့်နံနံ ပင်အတို့။
၂။ ဝက်ပေါင်သားမျှစ်ချဉ်ချက်၊ ငါးခြောက်ထောင်းကြော်၊ မြင်းခွာရွက်သုပ်၊ ငါးပိငရုတ်သီးအစိမ်းထောင်း၊ အတို့စုံ။
၃။ အမဲသားစဉ်းကော၊ ရွှေဖရုံသီးချက်၊ မန်ကျည်းသီးစိမ်းကြော်၊ ဟင်းနုနယ်ရွက်သုပ်။
၄။ ငါးခူကြော်နှပ်၊ ကျောက်ဖရုံသီးဟင်းရည်၊ ပန်းထုပ်ဆီပြန်၊ ခရမ်းချဉ်သီးထောင်း။
၅။ ပြည်ကြီးငါးခရမ်းချဉ်သီးချက်၊ ဒန့်သလွန်သီးဟင်းရည်၊ ဘဲဥမွှေကြော်၊ ငါးပိရည်ဖျော်၊ အတို့စုံ။
၆။ ဆတ်သားခြောက်ဖုတ်၊ သခွားသီးကြက်ရိုးချက်၊ ဆင်ခရမ်းချဉ်သီးထောင်း။
၇။ ဘဲသားအာလူးအချိုချက်၊ သရက်သီးထောင်း၊ ကြာစွယ်ဟင်းရည်၊ ပုစွန်ခြောက်ငါးပိကြော်။
အဆိုပါ ဟင်းလျာအတွဲ အစပ် (၇)မျိုးထဲမှ ငါးခူကြော်နှပ်၊ ကျောက်ဖရုံသီးဟင်းရည်၊ ပန်းထုပ်ဆီပြန်၊ ခရမ်းချဉ်သီးထောင်းတို့ကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
‘အမေ့ အစောကြီးထပြီး ဘယ်သွားမလို့လဲ’
‘ဈေးသွားမယ်လေ။ နေ့တိုင်းသွားတဲ့ကိစ္စကိုပဲ အထူးအဆန်းလုပ်ပြီး မေးနေတယ်။’
‘ဒီနေ့ ပိုစောနေသလာလို့ . . . ‘
‘တနင်္လာဆို ဆွမ်းတန်းရှိတယ်။ အသားတွေအတွက်က ချက်ပြီးပေမဲ့၊ အသီးအရွက်တွေအတွက် စောစောဝယ်ပြီး လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ချက်ရအောင်လို့ပါ။’
‘တစ်ခုခုစားမသွားဘူးလား၊ သမီးကော်ဖီဖျော်ပေးမယ်။ ပေါင်မုန့်မီးကင်လေးနဲ့ . . . ‘
‘နေပါသမီးရယ်၊ အမေဗိုက်မဆာတတ်ပါဘူး။ ပြန် လာမှပဲ သမီးတို့နဲ့အတူ မနက်စာ စားမယ်လေ။’
‘အမေဈေးသွားရင် အမြဲအဲလိုပဲ၊ ပြန်လာမှပဲ စားစရာကို အမြန်နည်းနဲ့ ချက်မှာမဟုတ်လား’
‘ဒါမှ ဟင်းတွေ အစပ်အဟပ်ပိုကောင်းမှာ၊ ဗိုက်ထဲဆာနေမှ ဘယ်ဟင်းက ဘယ်လိုချက်ရင်ကောင်းမယ်၊ ဘယ်ဟင်းနဲ့ ဘယ်ဟင်းအရံနဲ့တွဲမှ လိုက်ဖက်မယ်ဆိုတာ စားချင်စိတ်တွေနဲ့ ပေါင်းမှ စိတ်ကူးကောင်းတာ၊ ဗိုက်ပြည့်ပြီး စားချင်စိတ်မရှိရင် တွေ့ကရာချက်လို့ကတော့ သွားပြီသာမှတ်၊ ဟင်းချက်တဲ့နေရာမှာလည်း ပညာသည်များလို ခံစားချက်လိုတယ်’။
‘မှတ်ထားဦးမှပဲ၊ (ဟင်းချက်ရန် ဈေးသွားလျှင် ဘာမှစားမသွားရ) သမီးဆိုရင်တော့ ဗိုက်ဆာဆာနဲ့ ဈေးထဲ တွေ့ရာစားစရာတွေ အရင်ဝယ်စားပစ်မှာ။’
‘ဈေးစားရင်းနဲ့ဝယ်တော့ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဟင်းပေါ်မှာရော ဈေးပေါ်မှာရော ခံစားမှု ဘယ်တူကျမလဲ။ သမီးကိုပြောနေတာနဲ့ပဲ နောက်ကျနေပြီ။ ဟင်းခတ်တွေစဉ်းစားရင်း သွားတော့မယ်။’
ဆွမ်းဟင်းအတွက်က ချက်ပြီးပေမဲ့ အသီးအရွက်ကြော်ဖို့ သီးစုံဝယ်ရမယ်။ အိမ်သားတွေအတွက်တော့ ငါးခူကြော်နှပ်၊ ပန်းပွင့်ဆီပြန်၊ ကျောက်ဖရုံသီးဟင်းရည်၊ ခရမ်းချဉ်သီးထောင်းဆို ကောင်းမလား’ ‘ငါးကျဲဆီပြန်၊ ချဉ်ပေါင်ခါးဟင်းရည်၊ ငရုတ်သီး ငါးပိကြော်ဆိုရင် အဆင်ပြေမလား . . . ‘
ဒီနှစ်တွဲထဲက ငါးခူကြော်နှပ်အတွဲကိုပဲ ချက်လိုက်ပါမယ်။ ငါးခူအရွယ်တော် သုံးဆယ်သား၊ ငါးကောင် (သို့) ခြောက်ကောင်၊ အရိအရွဲတွေပြောင်စင်အောင် ဆား၊ နနွင်း ဗီနီကာနဲ့ပွတ်နယ်ပြီး ဆေးမယ်။ အူနုတ်ပြီး ခေါင်းဖြုတ် လိုက်ပါမယ်။ ရေစင်အောင်စစ်ပြီး ဘေးဘယ်ညာ ဓားရာ အစောင်းလေးတွေပေးမယ်။ ဆားလက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ် ဝက်နဲ့ အရသာမန်ကျည်းစေ့လောက်ထည့်နယ်ထားမယ်။ မကပ်တဲ့အိုးထဲ ဆီတစ်ဆယ်သားထည့်ပြီး ငါးခူတွေ အနေတော်ကြွပ်အောင် ကြော်မယ်။ ငါးခူကြော်ရရင် မီးပိတ်ပြီး ဆီတစ်ဝက်နှုတ်မယ်။ ကျန်ဆီထဲကို ကြက်သွန်နီနှစ်ဥ ပါးပါးလှီး၊ ကြက်သွန်ဖြူတစ်ဥ ညက်အောင်ထောင်းထားတာ ထည့်ကြော်မယ်။ ကြက်သွန်ဖတ်တွေ ရွှေဝါရောင်သန်းလာရင် ဆားအရသာ နည်းနည်းစီ၊ ငရုတ်သီးအကြမ်းဖတ် စတီးဇွန်းတစ်ဇွန်း၊ ပေါင်းထည့်မယ်။ မီးအရှိန်လျော့ပြီး ကြော်ပြီးသားငါးခူတွေနဲ့ ရောမွှေလိုက်ရင် ငါးခူငရုတ်သီး ကြော်နှပ်ရပါပြီ။ ကြိုက်တတ်ရင် ငံပြာရည်အနည်းငယ်ထည့်ကြော်လို့လည်းရပါတယ်။ အရသာ ပိုပြီးလေးလေးပင်ပင်ရှိပါမယ်။
ပန်းပွင့်ဆီပြန်အတွက် ရှမ်းပြည်ကလာတဲ့ အစိမ်းရောင်အနည်းငယ်သန်းတဲ့ ပန်းထုပ်တစ်ဝက်၊ အထုပ်သေးရင် တစ်ထုပ်လုံးချက်ပါမယ်။
အဆာအတွက် ကြက်သွန်နီတစ်လုံးနဲ့ ငရုတ်ပွနှစ်တောင့် အစေ့ထုတ် ရေစိမ်ရောထောင်းထားတာကို ဆီငါး ကျပ်သားနဲ့ အဆာသွတ်ပါမယ်။ ကြက်သွန်ဖတ်တွေ ရွှေဝါရောင်ပြောင်းရင် ကြိတ်ထားတဲ့ ခရမ်းချဉ်သီးကြီးကြီးတစ်လုံး ထပ်ထည့်ပါမယ်။ ခရမ်းချဉ် သီးထဲပါတဲ့ အရည်ခန်းရင် အနေတော်ပိုင်းဖြတ်ပြီး ရေစိမ်ထားတဲ့ ပန်းထုပ်တွေ ထည့်ပါမယ်။ ရေစတီးဇွန်းတစ်ဇွန်းလောက် ထပ်ဖြည့်ပြီး ဆားလက်မလောက်နဲ့ သကြားအရသာ မှုန့်ပေါင်း လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဝက်သာထည့်ပြီး နှစ်မိနစ်အဖုံးအုပ်ပြီး တည်ပါ။ ပွက်ဆူ လာရင် အရသာမြည်းပြီး အိုးချလို့ ရပါပြီ။ (ပန်းပွင့်တွေ နူးအောင်မတည်ရပါ) အရသာကိုတော့ မဖြစ်မနေကောင်းအောင်မြည်းပါ။
ကျောက်ဖရုံသီးဟင်းရည်အတွက် သန့်စင်ထားတဲ့ ကြက်ရိုးနှစ်ဆယ်သားနဲ့ ရေတစ်လီတာကို ပွက်ဆူအောင် တည်မယ်၊ ကြက်သွန်ဖြူ ငါးတက်နဲ့ ချင်းလက်မလောက် အခွံနွှာပြီး ဓားပြားရိုက်ထည့်မယ်။ ငံပြာရည်ချို စတီးဇွန်း တစ်ဇွန်း၊ ဆားအနည်းငယ်၊ အရသာမှုန့် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဝက်နဲ့တူ အခွံနွှာထားတဲ့ ကျောက်ဖရုံသီးတစ်စိတ် အနေတော်တုံးပြီး ထည့်မယ်။ ကျောက်ဖရုံသီးနူးရင် ဟင်းရည်ကျက်ပါပြီ။ ပူပူနွေးနွေးမှာ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်လေး ထပ်ဖြည့်လိုက်ပါမယ်။
ခရမ်းချဉ်သီးထောင်းကတော့ ခရမ်းချဉ်သီး၊ ငရုတ်သီးမီးဖုတ်ပြီး ကြက်သွန်ဖြူ နဲ့ ရောထောင်းထားတာပါ။ ချဉ်စေချင်ရင် ကိုင်းခရမ်းချဉ်သီးသုံးပြီး သိပ်ချဉ်တာ မကြိုက်ရင် ရှမ်းပြည်ခရမ်းချဉ်သီးသုံးပါ။ ဆားလေးခတ်ပြီး နံနံပင်အုပ်ရင် ပြည့်စုံပါပြီ။ ဆီပါကြိုက်ရင် ပဲဆီတစ်ဇွန်း ထည့်လိုက်ပါ။
ဘယ်လိုဟင်းအတွဲအစပ်ကိုပဲချက်ချက် ဆာဆာနဲ့ ချက်ရတာ၊ စိတ်ပါလက်ပါ ရှိသလို ဆာဆာနဲ့ စားရတာလည်း အရသာပိုမိုကောင်းမွန်ပါတယ်။ ဆာတိုင်းစားနိုင်တဲ့သူများ အားလုံးဖြစ်ကြပါစေ။
♦ ပန်းထုပ် – ၁ ထုပ် (အသေး)
♦ ငရုတ်ပွ – ၂ တောင့်
♦ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆီ – ၅ ကျပ်သား
♦ ခရမ်းချဉ်သီး – ၁ လုံး (အကြီး)
♦ ရေ – စတီးဇွန်း ၁ ဇွန်း
♦ သကြား၊ အရသာမှုန့် – လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တစ်ဝက်
♦ ကျောက်ဖရုံသီး – ၁ စိတ်
♦ ကြက်ရိုး – ၂ဝ သား
♦ ချင်း – လက်တစ်ဆစ် (ဓားပြားရိုက်)
♦ ငံပြာရည်ချို – စတီးဇွန်း ၁ ဇွန်း
♦ ငါးခူ – သုံးဆယ်သား
♦ ဆား – လက်ဖက်ရ ည်ဇွန်း တစ်ဝက်
♦ ပဲပိစပ်ဆီ – ၁ဝ သား
♦ ကြက်သွန်နီ – ၂ ဥ (ပါးပါးလှီး)
♦ ငရုတ်သီးအကြမ်းဖတ် – စတီးဇွန်း ၁ ဇွန်း